Ny marika manerantany 100 an-tampon'ny taona dia nanambara | Famoronana an-tserasera
Tamin'ny taona fahasivy ambin'ny folo, Interbrand dia nanome naoty ny marika 100 ambony amin'ny lafiny eigenvalue ananany. Tokony holazaina fa ireo marika ireo dia tsy miankina amin'ny toerany amin'ny fananana endrika amboarina tsara, fa amin'ny fanekena sy ny lanja ananany manerantany.
Tamin'ny taon-dasa dia Apple, sarobidy 184,154 tapitrisa dolara ilay naka ny laharana voalohany, arahin'i Google sy Microsoft amin'ny laharana faharoa sy fahatelo. Ary i Apple no amin'ity taona 2018 ity dia manohy mitazona ny mpitarika. Andao fantarina ny sisa amin'ny sokajy.
Google no manaraka amin'ny laharana faharoa miaraka amin'ny fitomboana 10 isan-jato hatramin'ny taon-dasa, raha Amazon kosa no maka ny laharana fahatelo amin'ny Microsoft. Ny orinasa mitazona ny rafitra miasa Windows dia mijanona amin'ny laharana fahefatra.
Anisan'ireo marika niditra tamin'ny lisitr'ireo marika ambony 100 mahita Spotify miaraka amin'ny laharana faha-92, Subaru, mpanamboatra fiara, izay mijanona amin'ny laharana farany na Chanel, izay niverina teo amin'ity lisitra ity.
Like Niverina i Chanel, Nintendo ary Hennessy amin'ny lisitr'ireo marika ambony 100 amin'ny 2018 hanandrana hijanona. Mazava ho azy, misy marika hafa voaroaka, toa an'i Tesla, Smirnoff ary Thomson Reuters. Amin'ny maha-zavatra mahaliana azy, Facebook dia mijanona eo amin'ny laharana faha-9, raha toa ka very 6 isan-jato ny sandan'ny marika. Raha ampitahaintsika amin'ny 6% io 48% io tamin'ny taon-dasa, dia midika izany fa misy zavatra mitranga ao amin'ny orinasan'i Marc Zuckerberg.
Vitanay ihany tamin'ny farany ireo sehatra indostrialy dimy misy marika be indrindra. Ny indostrian'ny fiara dia manana ny isa ambony indrindra miaraka amin'ny 16, serivisy ara-bola misy 12, rendrarendra miaraka amin'ny 9 sy FMCG (entam-barotra mpanjifa haingam-pandeha na fonosana haingana) miaraka amin'ny 9, na dia ny sehatra nitombo indrindra aza dia lafo, miaraka amin'ny 42 isan-jato.
Mamela anao amin'ity lahatsoratra mahaliana mifandraika ity izahay miaraka amin'izay ao ambadik'ireo marika famantarana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Marika 100 ambony 2018 naseho